.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Moe Ka Byar - Flash Songs
Moe Ka Byar - Flash Songs
ဒီ Web Page လေးကို မိုးကဗျာရဲ့ Flash Songs လေးတွေ တင်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းအလန်းလေးတစ်ခု စဉ်းစားပြီးတော့
နောက်ခံပုံလေးကို မိုးကဗျာကပဲ ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကျပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အထိ ၃ ၄ ခါ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ သူ့ရဲ့ Flash Songs တွေ တင်ထားတဲ့ Web Page လေးကို အချောသတ် လုပ်လို့ ပြီးစီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့်
လောလောဆယ်တော့ တင်ပေးဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နည်းနည်းလေး ပြင်စရာလေးတစ်ချို့ ရှိသေးတယ် ထင်လို့ပါ။
နောက်နေ့ကျရင် နောက်ခံပုံလေး ကို ကွန်ပျူတာ Wall Paper လေး သုံးဖို့ တင်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 08:32